Otu Nkwado Ezinaụlọ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Otu Nkwado Ezinyere ugbu a nwere ndị ọkachamara 6, ndị niile na-arụkọ ọrụ ọnụ na ebumnuche nke inye gị ike iji nyere gị aka ị nweta nsonaazụ kachasị mma maka ezinụlọ gị yana gị na ịmekọrịta mmekọrịta iji nweta ihe kacha mma maka nwa gị.
Anyị na-enye 1: 1 nkwado na mmetụta uche. N'etiti anyi anyi nwere otutu amamịghe na otutu ihe omumu.
Onye no na otu anyi
Ihe nkiri Drama na Movement
Abụ m onye Sesame a zụrụ azụ na Drama and Movement Therapist na onye ruru eru Creative Arts Supervisor. Enwere m akwụkwọ akara akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Bereavement Childhood na ntọala dị na nyocha otu. Ana m enye usoro ọgwụgwọ ezinụlọ yana ihe nkiri ọ bụla na usoro ọgwụgwọ mmegharị maka ụmụaka. Na ezumike m na-akwado otu ihe nkiri maka ụmụnne.
Abụ m onye na-agwọ egwu, ebe m zụrụ na Mahadum Roehampton. Adị m ọkachamara n'ihe banyere mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ana m enye usoro ọgwụgwọ ezinụlọ yana usoro ọgwụgwọ egwu maka ụmụaka.
Onye Ọrụ Na-ahụ Maka Ezinaụlọ: KS1 & KS2
M na-arụkọ ọrụ ọnụ na Otu Nkwado Ezinụlọ yana ndị ọkachamara niile ịchọta ụzọ kachasị mma m ga-esi kwado gị. Enwere m ike iji nyere ezinụlọ gị aka na nkwukọrịta, ihe ngosi, oge nri, ụlọ mposi, usoro omume, oge nri ụtụtụ na usoro ihi ụra. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m site na email.
Onye Ọrụ Na-ahụ Maka Ezinaụlọ: Acorn na Early Years
Mụ na ndị otu nkwado ezinụlọ na otu gị na ụmụ klas gị na-arụkọ ọrụ nke ọma. Enwere m ike inyere gị aka n'ụlọ na nkwukọrịta, usoro akparamàgwà ziri ezi, iri nri na ị drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, usoro ihi ụra na mposi. Enwere m ike inye ezinụlọ gị nduzi dị mkpa na akụrụngwa iji kwado nwa gị na ezinụlọ gị na ndụ kwa ụbọchị. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ m site na email.
Nwa ndi oka mmuta
Inwe nwatakịrị nwere nsogbu mmụta na-eme ka ị gaa njem nke ikekwe ị hụbeghị na ebe ihe na-anaghị abụkarị otu ha kwesiri ịdị. Oge ụfọdụ ị nwere ike iche na i nweghị ohere ịche maka mkpa nke onwe gị na nchegbu gị. Might nwekwara ike na-echegbu onwe gị banyere ọdịnihu maka nwa gị ma ọ bụ ikekwe banyere mmetụta ọ nwere ike inwe na ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ. Ọ nwere ike ịba uru mgbe ụfọdụ ịkekọrịta nchegbu ndị a. Ana m enye 'Oghere iji chee echiche' iji nyere ndị nne na nna na ezinụlọ aka ịchọta ụzọ n'ihu. Oge nnọkọ nzuzo zuru oke.
Onye nhazi oge gboo
Fọdụ ezinụlọ nwere nsogbu na nsogbu n’oge dị iche iche na ndụ ha nke nwere ike ịmetụta ụmụ ha. Ọrụ m na Oakleigh bụ ịtụle mkpa nke ezinụlọ ma tụọ ma rụọ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ndị nwere ike inyere ha aka. Ana m arụkọ ọrụ ọnụ na ndị otu ndị isi, ndị ọrụ nkuzi na ndị ọrụ ndị nne na nna ọzọ iji mee mkpebi doro anya gbasara ihe kacha mma maka gị na ezinụlọ gị.
Mgbe anyị dị:
Tuzdee, Wenezdee na Tọsde
Mọnde na Tuesday
Claire Marsh kwuru
Tuzdee - Tọsde
Morningtụtụ Mọnde na Tọzdee
Ọzụzụ Barnet Children's Integrated na-enye ọzụzụ ndị a:
Barnet CIT Mmemme Nlekọta Ndị Nne na Nna na 2021